Xisaabinta boholo ama boholo ah
Xisaabinta mugga la qodayna
Dhererka la qodayna L
L - dhererka guud ee boholo ama boholo
A - width sare ee
B - width hoose
H - si qoto dheer ka qoday
Barnaamijka tixgelinaysaa meesha mugga iyo dusha of xabaal ah.
Haddii width ah ee sare iyo ka hoose ee la qodayna way kala duwan yihiin, mugga waxtar leh waxaa sii loogu talagalay C iyo mugga dalcadaha D.
Waayo, dhismaha isgaarsiinta, tuubooyinka, kuleyliyaha, booso ama ku rakibidda aasaaska strip meesha aad degan tahay waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si qodo qoday meel ku. Waxaad yeeri kartaa takhasusay inay sameeyaan, laakiin waxa aad naftaada u samayn kartaa shaqada. Laakiin dhab ahaantii, labada kiis ee aad u baahan doontaa in la ogaado qaar ka mid ah sifooyinka of leefay. iyaga Hel kaa caawin doonaa barnaamijka. Iyada oo ku saleysan dhererka, width oo si qoto dheer ka qoday, waxaa go'aaminaya mugga iyo dusha ay goobta. In kiiska halkaas oo width ah ee sare iyo ka hoose ee la qodayna way kala duwan yihiin, iyo waxa ay sidoo kale noqon doonaa mugga xisaabiyaa dalcadaha waxtar leh. Xisaabinta mugga qodayna kaa caawin doona inaad ma aha oo kaliya hawlahooda u fududeeya, laakiin sidoo kale si loo xisaabiyo kharashka shuqullada dalka, haddii aad go'aansato in aad isticmaasho adeegyada takhasuska.
Markaasaa Ananiyas tegey qoday meel ku
Waxaa jira saddex siyaabood ee qodaya godod. Qodis boholo Tani by gacanta, gacan ama trencher trencher leh.
Kiiska hore sida caadiga ah waxaa billaabeen, halkaas oo ma jiraan wax ay helaan qalab gaar ah. Tani waa hab si cadaalad ah waqti lumis ah trenching, taas oo si weyn u saameeyaa tayada ciidda ah.
trenchers Hand gaabin waqtiga shuqulladaada oo kale. Waxaa laga iibsan karaa ama kiro ah. Waxa kale oo aad ka dalban kartaa Qodis ka boholo in shirkadda gaarka ah. Markaasaa waxaa u qabata xirfadle.
dhulka qoda waxaa loo isticmaalaa meesha on site eryi karo qalabka dhismaha, iyo sidoo kale halkaas oo ay jiraan xaddi weyn oo shaqada. Ka hor inta aad kireysato backhoe ah waa in aad u ogaato width ee ugu hooseysa ka qoday uu u qaado gaariga la size ee baaldi ah in u dhiganta in ay.
Haddii aad go'aansato in aad qod qodayna naftaada, ugu horreeya oo dhan, waa in aad ogtahay in ay qaadato qoto dheer ka qoday qaar ka mid ah ee noocyada kala duwan ee shaqada. Sidaas darteed, tusaale ahaan, maxaa yeelay, yeynan fiilooyinka, sida caadiga ah qodayaa qoto dheer ka qoday ee ku saabsan 70 cm ah. Oo wasakhda u baahan qoday oo qoto dheer. Waa suurad wacan in tani ay ahayd bar qoto dheer meter ka weyn si qoto dheer ee lagu keydsho ciidda.
On width ee la qodayna wuxuu sidoo kale saamayn nooca shaqada sameeyo. width ugu yar ee la qodayna waxaa lagu cabbiraa weheliyaan salka iyo waa in dhigma nooca iyo baaxadda of tuubooyinka Mire Waqaf waxa ku jira.